iPhone araparawo mgbake mode! Nweta ya edozi na 1 click
Mgbe na-eji ihe iPhone, somtimes ị ga-ezute ọnọdụ ndị na-achọ ka ị na-etinye gị iPhone mgbake Mode na-edozi nsogbu. Otú ọ dị, na N'aka nke ọzọ, mgbe ụfọdụ, ị ga-idozi iPhone mgbake akaghị ma ọ bụ na-esi gị iPhone si Iweghachite ọnọdụ iji mee ka ọ na-ọrụ na-ahụkarị. Ọ bụrụ na ị bụghị familar na otú itinye gị iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ ma ọ bụ inwe iPhone si Iweghachite ọnọdụ, echegbula. Mgbe na-agụ ndị na-esonụ ọmụma, ị ga-eme ya n'ụzọ dị mfe. Niile ozi kwuru n'okpuru bụ appliable ka iPhone 3G na mgbe e mesịrị ụdị, gụnyere iPhone 6s (Plus) na iPhone 6 (Plus).
Part 1: Olee na-etinye iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ na 2 Mfe Nzọụkwụ
Nkebi nke 2: Get iPhone si Iweghachite ọnọdụ na-enweghị Iweghachi iPhone (NO data ọnwụ)
Nkebi nke 3: Idozi "iPhone Nọgidesiri na mgbake mode" site Iweghachi iPhone na iTunes (data nwere ejighi)
Part 1: Olee na-etinye iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa, na-agba ọsọ iTunes.
Nzọụkwụ 2. Pịa Home button na Ike button na gị iPhone n'otu oge. Mgbe ị na-ahụ Apple logo pụtara, hapụ Ike button na na-na na ịpị Home bọtịnụ ruo mgbe ị na-iTunes anya sị gị iPhone bụ na mgbake mode. Ị ga-ahụ na ihuenyo gosiri na gị iPhone.
Video Tutorial: otú etinye iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ
Nkebi nke 2: Get iPhone si Iweghachite ọnọdụ na-enweghị Iweghachi Your iPhone
Nanị ukara ụzọ na-iPhone si Iweghachite ọnọdụ bụ iweghachi gị iPhone na iTunes. Otú ọ dị, otú a ga-ihichapu niile data na ọdịnaya na gị iPhone, na-eme data ọnwụ. Na mgbe ụfọdụ, ọbụna ị na-agbalị wepuÚ Iweghachite ọnọdụ site na-eweghachiri gị iPhone na iTunes, Ị ka ga-eche ihu na-eweghachiri njehie. N'ezie, ọ bụghị na ike dozie nsogbu. Niile ị chọrọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS, nke ga-enyere gị edozi nsogbu nile na-eche gị ihu mgbe na-gị iPhone si Iweghachite ọnọdụ. Lelee-esonụ nkọwa.
2 Mfe Nzọụkwụ Ịlụ iPhone si Iweghachite ọnọdụ na-enweghị Data Loss
Mgbe ị na-ahụ 'jikọọ iTunes' ịdọ aka ná ntị na gị iPhone, ị kwesịrị ị na apụ-agbalị 2 mfe nzọụkwụ na-esi gị iPhone si Iweghachite ọnọdụ.
Nzọụkwụ 1. Download Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) na wụnye ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na kọmputa na eriri USB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ị ga-ahụ na ihe omume ahụ na-achọpụta rụọ gị iPhone, sị na ọ bụghị na nkịtị mode. Nanị pịa na "Malitegharịa ekwentị ahụ na ngwaọrụ" button na-esi gị iPhone azụ nkịtị. Ọ bụ ezigbo mfe.
Idozi Njehie maka ndiwọrọ Iweghachite ọnọdụ
"Mgbe m na-agbalị jikọọ m iPhone na m PC na rụrụ Iweghachi iPhone usoro, iTunes wee wepụ software ma na ẹkụre mmịpụta m ga-esi njehie ozi na-agwa m 'The iPhone-apụghị weghachiri eweghachi. An amaghị njehie mere' m gbalịrị nke a ọtụtụ ugboro ma na-kpọmkwem otu njehie oge ọ bụla "
Ọ bụrụ na ị na-enwe na-eweghachiri njehie, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbalị na "rụkwaa Sistem" na Dr.Fone maka iOS idozi nweta gị iPhone si Iweghachite ọnọdụ. The Iweghachi njehie eme ukwuu n'ime n'ihi na sistemụ na gị iPhone rụrụ abnormally. Pịa "rụkwaa Operating System" na isi window nke Dr.Fone maka iOS na-eme ihe ọ na-agwa gị ka i mee idozi sistemụ arụmọrụ. Ọ bụrụ na ọ ọma idozi sistemụ, ọ ga-agwa gị. Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ichere gị iPhone Malitegharịa ekwentị.
Nkebi nke 3: Idozi "iPhone Nọgidesiri na mgbake mode" na iTunes
N'ọnọdụ ka ukwuu, ị nwere ike nweta gị iPhone si Naghachi akaghị site iTunes. Ị nwere ike iji ya weghachi gị iPhone ya ntọala mbụ mfe na ngwa ngwa. Site n'ụzọ, ọtụtụ ekwentị nsogbu nwere ike ofu site Iweghachi ụlọ ọrụ ntọala ma ọ bụ weghachi na iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere.
Jikọọ gị iPhone na iji eriri USB na kọmputa, na-agba ọsọ iTunes. Mgbe iTunes achọpụta rụọ gị iPhone, ọ ga-enye gị ozi na-ekwu na gị iPhone bụ na mgbake mode na mkpa ka ị weghachi ya. Dị pịa iji weghachi ya. Nke ahụ dị mma.
Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi, biko ike anya gị iPhone. Dị nnọọ na-Ike bọtịnụ ruo mgbe ihuenyo-agba ọchịchịrị ma ọ bụrụ na i nwere ike ime ya na omenala way.Then pịa Home bọtịnụ na ihu nke ngwaọrụ. Mgbe ekwentị na, na-na na ịpị Home bọtịnụ ruo mgbe iTunes Pop elu ozi.
Cheta na: tupu ị na-eme dị ka ihe e kwuru n'elu, biko ndabere gị iPhone gị iTunes. Ihe niile na gị iPhone ga-ihichapu mgbe na-eme ka weghachi. Ọ bụrụ na ị na-mere a ndabere maka gị iPhone tupu, mgbe ahụ, mgbe e mesịrị i nwere ike iweghachi gị iPhone si iTunes ndabere faịlụ.
Olee otú Hichapụ / Doro Anya Ozi na iPhone
iPhone Oti mkpu na Nsogbu na Nchọpụta nsogbu
> Resource> iPhone> 2 nkeji itinye gị iPhone n'ime ma ọ bụ Sinụ n'ime Iweghachite ọnọdụ